Blackmagic Design သည် Videohub Smart Control Pro ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Blackmagic ဒီဇိုင်းကြေညာချက်များ Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကို
Blackmagic ဒီဇိုင်းကြေညာချက်များ Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကို
Fremont, California ပြည်နယ် - စက်တင်ဘာလ 13, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကို, router ကို crosspoints ပြောင်းအမြန်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းရဲ့အသစ်တခုလှပသောဒီဇိုင်း Router က control panel ထဲကကြေညာခဲ့သည်။ Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုသာ $ 695 များအတွက်ရောင်းချမည်ပါလိမ့်မယ်။
Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုပုအပေါ်သရုပ်ပြပါလိမ့်မည် Blackmagic ဒီဇိုင်း IBC 2019 တဲ 7.B45 ။
Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျနှင့်အသေးစားနံပါတ်များတပ်ဆင်ပြီးတော့အားလုံး router ကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်မျှဝေခံဖို့ကန့်သတ်ထားဖြစ်ကြောင်းရိုးရာဟာ့ဒ်ဝဲ router ကိုထိန်းချုပ်ပြားမှကွဲပြားခြားနားသည်။ Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်မည်သည့် Router က output ကိုသတ်မှတ်ထားနိုင် 48 RGB illuminated ကြည်လင်ကြည့်ခလုတ်ပါရှိပါတယ်။ Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကုန်းပတ်အောက်တွင် installed နှင့်စက်ရုံအတွက်စောင့်ကြည့်, ဒါကြောင့်မော်နီတာဖို့ Router က output ကိုတစ်ခုတည်း button ကိုစာနယ်ဇင်းနှင့်အတူသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်နိုင်ပါသည်။ အားလုံး routing သာတစ်ခုတည်း button ကိုစာနယ်ဇင်းလိုအပ်သောကြောင့်ဒီအလုပ်လုပ်တစ်အများကြီးပိုမြန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုတစ်ဦးမော်နီတာအောက်မှာ install လုပ်ထားပါကဥပမာ, ထို့နောက်ကြောင့်မော်နီတာချိတ်ဆက် Router က output ကိုတစ်ဦးချင်းစီ button ကိုစာနယ်ဇင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသည် router အရင်းအမြစ်ဟုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုကို USB connection ကိုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ button ကိုတင်ထားရန်အသုံးပြုရလွယ်ကူ, Mac နဲ့ Windows ဆော့ဖ်ဝဲကိုပါဝင်သည်။ ခလုတ်တောက်ပအဖြူ illuminated နေကြသည်။
Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုလည်းမျိုးစုံနေရာများနှင့်အတူအသုံးပြုရနိုင်ပြီး, ဖောက်သည်တစ်ဦးတပြင်လုံးကို control panel ထဲကအဘို့တစ်ခုတည်းဦးတည်ရာကို, ဒါမှမဟုတ်မျိုးစုံနေရာများရှိသည်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ မျိုးစုံနေရာများအတူလုပ်ကိုင်သောအခါ, ရှေ့ panel ကိုအပေါ်ခလုတ်ကိုရွှေအရောင်ဖြစ်လာကြပြီးလိုအပ်အဖြစ်ဖောက်သည်အဖြစ်အများအပြားတွင် Destinations ရွေးနိုင်သည်။ Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုလည်း button ကို "ယူ" နှင့် enabled သောအခါ, ယူခလုတ်ကိုအောက်ပိုင်းညာဘက်ခလုတ်ကိုဖြစ်ပြီး, အနီရောင် illuminated ၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ အကွိမျမြားစှာနေရာများနှင့်ယူ button ကိုအင်္ဂါရပ်တစ်ခုတည်း panel ကို router ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးမျိုးစုံပစ္စည်းတွေအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ခွင့်ပြုနှင့်သိသိသာသာကြီးမားအဆောက်အဦအတွက်ကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေတယ်လေ။
Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှဖောက်သည်များ install လုပ်ဘို့လွယ်ကူသောဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုစံ Ethernet ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အသုံးပြုရိုးရှင်းစွာတည်ဆဲကွန်ပျူတာကွန်ယက်ကိုကိုမဆိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ မစ်ရှင်အရေးပါပတ်ဝန်းကျင်မှာများတွင်အသုံးပြုပါက, Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံ switch ကိုချိတ်ဆက်ထားနိုငျသညျ။ Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုအာဏာပေးဝေဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲ Ethernet (poe) ကျော်အာဏာကိုကနေတဆင့် powered နိုင်ပါသည်။
Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုဖန်တီးမှု post ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများသို့ fit ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ပြီးသောကြောင့်, ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းဆွဲဆောင်မှုကြည်လင်ကြည့်ခလုတ်ပါဝင်သည်။ ခလုတ်ကိုထုပ်ခလုတ်များတံဆိပ်ကပ်ခြင်းခွင့်ပြုရန်ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ငွေရတတ်သောသူနှင့်သန့်ရှင်းသောအရောင်များကိုတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အကွာအဝေးပြသနိုင်အောင်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး illumination အရည်အသွေး, ရှိသမျှခလုတ် RGB အယ်လ်အီးဒီနေဖြင့် illuminated နေကြသည်။ မှောင်မိုက်ခန်းများတွင်အသုံးပြုသည့်အခါ button ကို labels ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပါသည်နိုင်အောင်, ရှိသမျှခလုတ်, backlit နိုင်ပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်များ Videohub router များတစ်ခု router ကို control panel ကိုတောင်းခဲ့ကြ, ကြှနျုပျတို့ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖောက်သည်များအလွန်ပျော်ရွှင်စေလိမ့်မည်ဟုတစ်စိတ်ကူးဖြေရှင်းချက်ရှိတယ်ထင်!", Grant ကအသေးသုံးငွေ, CEO ဖြစ်သူကလည်း, Blackmagic ဒီဇိုင်း"ဒါဟာအံ့သြစရာကြည့်နဲ့ကျွန်မယင်း၏, သန့်ရှင်းရိုးရှင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုဒီဇိုင်းအားဖြင့်ဒါစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်, ပေါင်းကိုအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ကျနော်တို့နေရာတိုင်းသူတို့ကိုနေရာနိုင်အောင်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ရုံတစ်ခုတည်း button ကိုစာနယ်ဇင်းနှင့်အတူ၎င်း၏ input ကို select လုပ်နိုင်အောင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံသည်စက်ကိုအောက်ခလုတ်ရှိပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်ကြောင့် router ကိုထိန်းချုပ်စေသည်ဘယ်လောက်မြန်မြန်နားလည်ရန်ဤအလုပ်လုပ်ကြည့်ဖို့ရှိသည်။ ဒါဟာမယုံနိုင်စရာပဲ! "
Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုအင်္ဂါရပ်များ
မှတဆင့် Ethernet နဲ့ non စွမ်းအင်သုံးကွင်းဆက်ကျော်ပါဝါနှင့်အတူ Ethernet ချိတ်ဆက်မှု။
မဟုတ်တဲ့စွမ်းအင်သုံး Ethernet နဲ့တွဲသုံးဘို့ powered 110-250V ဗို့ AC အ။
ဆော့ဖျဝဲဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကနေတဆင့်သတ်မှတ်ထား optional ကို "ယူ" ခလုတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
control panel ထဲကပရိုဂရမ်းမင်းအဘို့, Mac နဲ့ Windows ဆော့ဖ်ဝဲကိုပါဝင်သည်။
ခလုတ်အမြင့်ဆုံး illumination အရည်အသွေး RGB အားဖြင့် illuminated နေကြသည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးလက်မနက်ရှိုင်းသောကျစ်လစ်သိပ်သည်း 1 ထိန်သိမ်းယူနစ်အရွယ်အစား, ။
အားလုံး Videohub မော်ဒယ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုကနေ, ဒေသခံတာဝန်နှင့်အခွန်ဖယ်ထုတ်ပြီးအမေရိကန် $ 2019 များအတွက်နိုဝင်ဘာလ 695 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် Blackmagic ဒီဇိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ။
ကုန်ပစ္စည်း Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကို၏ဓါတ်ပုံများအဖြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသော Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
Blackmagic Design မှအသစ် ATEM Mini Pro ISO ကိုကြေငြာခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 30, 2020
2019 IBC Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ blackmagic ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် videohub 2019-09-13
ယခင်: Aja သင်္ဘော IBC 44 မှာ 12G-SDI I / O နှင့်အတူ Corvid 12 2019G
နောက်တစ်ခု: Aja IBC 2019 မှာ FS-Mini ကို Frame က synchronous လွှတ်တင်